कसरी योजना एक एक्लै यात्रा यात्रा? | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > कसरी योजना एक एक्लै यात्रा यात्रा?
यसको सबै भन्दा राम्रो मा एक्लै यात्रा unadulterated आत्म-भोग र spontaneity छ. यसलाई कृपया आउनुहोस् र तपाईंले जान स्वतन्त्रता छ, एक ठाउँमा लामो समय रोक्नुहोस्, र व्यावसायीकृत साइटहरु लाई छाड्नुहोस्; यदि तपाईं पाऱ्यो सकिएन. मात्र बनाउन आवश्यक समझौता आफैलाई छन्. बढ्दो विश्वव्यापी यात्रा रुझान को धेरै बीचमा, एकल यात्राको शीर्ष स्थान लिइरहेका छन्, तर ठूल्ठूला एकल यात्राको ठूलो जिम्मेवारी आएको. उनीहरूले के भन्न थाहा, त्यहाँ कुनै पनि परिस्थितिको फाइदा र बेफाइदा छन्. यसलाई जान आफ्नो इच्छा एक्लै हालतमा तपाईं अगाडि-सोच र तयार हुन छ. को Buck तपाईंसँग रोक्छ. जब कुराहरू एक सानो नासपाती आकारको जाने, तपाईं यो क्रमबद्ध गर्न भरोसा र व्यावहारिक ज्ञानयुक्त छ गर्न आवश्यक. यहाँ सोलो ट्राभल ट्रिपको योजना कसरी बनाउने भन्ने बारे हाम्रा उत्तम सुझावहरू छन्.
रेल परिवहन छ पारिस्थितिकी-मैत्री र Safest बाटो यात्रा. thलेख बचत एक ट्रेन द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ छ, सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट विश्व मा.
एकल यात्रा यात्रा: यात्रा रेल
एकल यात्री लागि सबैभन्दा लोकप्रिय यातायातका मोड को एक छ रेल द्वारा यात्रा. रेल द्वारा यात्रा अप गन्तव्यहरू को एक महान नम्बर तपाईंले केही हप्ता मा squeeze गर्न सक्ने खोल्छ. सामाजिक तत्व पनि छ, यसलाई जडान गर्न ठूलो तरिका हो सँगी adventurers सुरक्षित वातावरणमा. रेल द्वारा एक्लै यात्रा पनि साँच्चै तपाईं तिनीहरूलाई पास रूपमा गन्तव्यहरू र परिदृश्यहरू हेर्न सक्षम हुन उत्कृष्ट तरिका हो. त्यहाँ पनि रेल कंडक्टर रेल फोटोग्राफी बारेमा सोध्न सिद्ध मानिसहरू हुन् कि एक अफवाह हो, तपाईंको अर्को सिद्ध इन्स्टाग्राम कथा लागि यो प्रयास.
गन्तव्य छनौट & बुकिंग आवास
आफ्नो एकल यात्रा लागि एक गन्तव्य छनौट गर्दा – जाँच बन्द-सिजन, जो आफ्नो बजेट एक सानो थप सुत्छन् गर्न मद्दत गर्न सक्छ. सम्पूर्ण यात्रा तपाईंको हो तर यति लागत छ. भनेर मनमा राख्दा, मौसम जाँच! यस बन्द-मौसममा केही गन्तव्यहरू बस horrid छन् र यो मन प्रमुख घटनाहरू वा मूल्यहरु skyrocketing पठाउन सक्नुहुन्छ कि बिदा राख्नको लागि एक राम्रो विचार हुनेछ. त्यहाँ आवास को कुनै कमी छ, तपाईं यात्रा गर्ने निर्णय जहाँ, होटल, बी&बी का, र Airbnb गरेको प्रशस्त. तपाईं र तपाईंको बजेट लागि सही छ कि एक छान्नुहोस्.
एकल यात्रा यात्रा: तपाईंको यात्रा योजना
Spontaneity एकल यात्रा को सबै भन्दा राम्रो भत्तों को छ तर, सुरु गर्न, प्रयास र विस्तृत यात्रा छ. यो एक उत्कृष्ट सुरूवात बिन्दु हो. तपाईंले रोजेको गन्तव्य प्रमुख विशेषताहरू पहिचान गर्न र एक समय सेट अप. एक भएको सौन्दर्य विस्तृत यात्रा एकै समयमा तपाईं साथ जान रूपमा परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ गर्दा यो मार्गदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने छ.
पहिले सुरक्षा कहिल्यै apter भएको छ. तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कहीं नयाँ र तपाईं को लागि unchartered, स्थानीय अपराध हट स्पट को mindful हुन र आफ्नो अनुसन्धान गर्न! तपाईं र बारेमा हुँदा, सादा दृष्टि बाहिर आफ्नो बहुमूल्य वस्तुहरू राख्न र आफ्नो फोन मा तल देख वरिपरि हिंड्न छैन प्रयास. तपाईं आफ्नो होटल नाम र ठेगाना बोक्न, बस मामला मा. प्रयास र केही स्थानीय आपतकालीन नम्बर आफैलाई familiarize र तपाईं आफ्नो विशेष गन्तव्य लागि सुरक्षा जानकारी अनुसन्धान गर्दा, साथै सांस्कृतिक शिष्टाचार मा एक सानो अनुसन्धान गर्न. सबै भन्दा राम्रो सुरक्षा सावधानीहरु को एक मित्र वा परिवारको सदस्य आफ्नो यात्रा साझेदारी छ. मान्छे थाहा आफ्नो योजना जहाँ तपाईं र के गरौं. तपाईं सँगसँगै बनाउन सक्छ कुनै पनि परिवर्तन तिनीहरूलाई अद्यावधिक.
एकल यात्रा यात्रा: बनाउन मित्र साथ बाटो
जबकि एकल यात्रा ठूलो छ, तपाईं कसैसँग बोल्ने बिना दिनको लागि जान सक्नुहुन्छ. शान्ति तपाईं एकल यात्रा गर्दै कारण हुन सक्छ तर यो अन्ततः आफ्नो टोल लाग्न सक्छ. Luckily, जब तपाईं कदम मा हो, यो नयाँ मान्छे भेट्न र केही कुराकानी अप प्रहार गर्न एकदम सजिलो छ. आत्मविश्वासी बन. तपाईंको आफ्नै एउटा परिचित उच्चारण लागि आफ्नो कान खुला राख्न र साझेदारी अनुभव सिद्ध छन् कि सम्झना बरफ-ब्रेकर सँगी यात्री जडान गर्न.
जब तपाईं एकल यात्रा, तपाईं आफै सबै बोक्न गर्न निश्चित गर्न आवश्यक. एक लैजाने-मा, एक सुटकेस, वा ब्याकप्याक सामानको उत्तम मात्रा हुनुपर्छ तपाई एक हप्ता वा तीन यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ. गन्तव्य लागि प्याक, मौसम लागि ड्रेस, जो आफ्नो लोड हल्का गर्नुपर्छ. तपाईं यसलाई केवल अनिवार्य प्याक र अव्यवस्था पछि छोड्ने कसरी राम्रो महसुस मा हैरानी हुन चाहन्छु. आफ्नो क्यामेरा सधैं एक आवश्यकता छ, हातमा एकल यात्रा र फोटोग्राफी गो हात.
एकल यात्रा यात्रा: खाने एक लागि
तपाईं एकल यात्रा मा शाखा गर्न साहसी पर्याप्त छन् भने, तपाईं एक्लै खान साहसी पर्याप्त छन्. धेरै देशहरूमा, नास्ता र दिउँसोको खाना तपाईं एक परिदृश्य लागि तालिका डर मान्ने छन् भने त आकस्मिक पक्षमा बढी गर्छन, यी भोजन पटक सुरु. पुस्तक वा पत्रिका लिन तपाईंसँग र एक्लै डाइनिंग यदि साँच्चै आफ्नो कुरा छैन, स्थानीय meetup समूह मा नजर. तपाईं foodie सैर मा revel गर्ने मान्छे संग जडान गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं चाहनुहुन्छ भने साँच्चै भीडलाई जोगिन चाहनुहुन्छ, एक भान्सा प्रदान गर्दछ र आफ्नो आँधी पकाउन कि आवास को लागि नजर.
पुग्नुहुन्छ दिन प्रयास
जब तपाईं योजना हो तपाईंको यात्रा, डेलाईट घण्टाको आइपुग्छन् गर्न योजना प्रयास. यो तपाईं एकल यसलाई गरिरहेका छन् जब गाढा र पनि अधिक त एउटा अपरिचित शहर मार्फत आफ्नो बाटो पत्ता लगाउन एकदम मुश्किल कार्य हो. योजना आफ्नो एकल यात्रा मिशन को एक जटिल अंश हुनेछ, सुरु गर्न, र तपाईं ebb र साथ सार्न तर यी साना विवरण अत्यन्तै फरक बनाउन रूपमा प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो केही परिभ्रमण गर्न सही विकल्प बनाउन र एक एक्लै यात्रा भएको. तपाईं कहीं अधिक ज्ञानेन्द्रिय र तपाईं वरिपरि भइरहेको छ के लागि खुला हुनेछ. सधैं आफ्नो पेट अन्त यात्रा र प्रयोग भरोसा एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “कसरी योजना एक एक्लै यात्रा यात्रा?” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/solo-travel-trip/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, र तपाईं / डे गर्न / tr वा / ES र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#traveleurope यूरोपबीट्रेन solotrip SoloTrips रेल यात्रा यात्रा सोलो